Xafladii Soo Af-jarida Tartanka Gabayada Nabada Ee Dhalinyarada Somaliland + Natiijadii Tartameyaasha [SAWIRO] “Kaalintuu ku guulaystay Maxamed Cismaan Budin oo aha abwaanka da’da yar ee ka socday Gobolka Awdal?” « SAWNEWS NETWORK
« Hambalyo : Meherka Md. Samaale Adam Muxumad iyo Marwo Xaliimo Ismaaciil Cusmaan.
Baanka Somaliland oo Si Rasmi ah Maanta Looga Furay Magaalada Laas-caanood: »
Xafladii Soo Af-jarida Tartanka Gabayada Nabada Ee Dhalinyarada Somaliland + Natiijadii Tartameyaasha [SAWIRO] “Kaalintuu ku guulaystay Maxamed Cismaan Budin oo aha abwaanka da’da yar ee ka socday Gobolka Awdal?”
Hargaysa (Sawnews)- Xaflad-tartaneed si weyn loo soo agaasimay oo dulucdeedu ahayd soo af-jarida tartanka Gabayada Nabada ee dhalinyarada Somaliland oo muddooyinkan-ba soo socday, ayaa caawa lagu qabtay Hoolka xafladaha ee Jaamacada Hargaysa.
Xafladaas oo ay soo qabnb-qaabiyeen ururka Nabada iyo dimuqraadiyada ee Geeska, oo sal-dhigiisu yahay magaalada Hilisink ee wadanka Filand, ayaa waxaa ka soo qayb-galay Gudoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha wakiilada Somaliland Md. Cabdi Casiis Maxamed Samaale, xildhibaano, Wasii ku xigeenka Isgaasinta Cali Sheekh, Culimo Aw Diin, Abwaano, Maamulka iyo Proffesarada Jaamacada Hargaysa, Aqoonyano, Ardayda Jaamacada iyo martisharaf kale oo aad u tiro badan.
Gudoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha wakiilada Somaliland Md. Cabdi Casiis Maxamed Samaale oo xafladaas ka hadlay, ayaa si weyn u soo dhaweeyey tartan-sugaaneedkaas ujeedadiisu ahayd adkaynta iyo baraarujinta nabad-gelyada. Waxaa kaloo uu hambalyo u soo jeediyey Ururka Nabada iyo Dimuqraadiyada ee soo qaban-qaabiyey tartankaas. Waxaana hadalasii ka mid ahaa oo uu yidhi “Waxa ay arrintani [Tartankaas] ina dareensiinaysaa in mustaqbalka gabayaasheenu uu yahay mid si weyn u ifaya.” Ayuu yidhi Md. Samaale oo intaa raaciyey “Waxaa kaloo muuqata in aynu leenahay rag gabayaa ah oo bedeli kara Hadraawi, Gaariye iyo kuwa la midka ah ah-ba.” Gudoomiye ku xigeenku waxa uu mahad-naq weyn u soo jeediyey guud ahaan dadkii sida qiimaha leh uga soo qayb-taatay tartan-sugaaneedkaas, isaga oo si gaar ah ugu mahad-celiyey Uruka horseedka ka ahaa abaabulka iyo qabashada tartantkaas. Waxaa isna halkaas kelmedo ka soo jeediyey Gudoomiyaha Jaamacada Hargaysa Dr. Xuseen Cabdilaahi Bulxan, oo si weyn u soo dhaweeyey xaflaf-tartaneedka Gabayada lagu soo bandhigayay, waxaana uu sheegay in Jaamacada Hargaysa u guntaday tayaynta iyo kor-u-qaadista dhaqanka iyo Sugaanta. “Jaamacada Hargaysa waxa ay u gundatay hoyga iyo dhisitaanka Sugaanka.” Ayuu yidhi Dr. Bulxan. Waxa uu ku booriyey Ardayda Jaamacadan dhigata iyo inta maanka ku haysa in ay ku soo biirto in Jaamacada Hargaysa diyaar u tahay soo dhawaynta cid kasta oo danaynaysa ka qayb-qaadashada horuminta iyo dhisida Sugaanta.
“Waxaan ku faraxsanahay oo aan soo dhawaynayaa dhalinyarada is abaabushay Gobol kasta haka soo jeedaane, waxaan idinku amaanayaa dadaalka aad u hurteen samayntii iyo hal-abuurnimadii Gabayadan aad ku tartamaysaan.” Ayuu yidhi Dr. Bulxan.
Waxaana uu intaa raaciyey oo uu yidhi “Sugaantii iyo cilmigii la uruuriyey oo dham Xamar ayaa loo wareejiyey. Dabadeed waa tii ay dagaaladu halkaas ka dhaceen oo waatii wax kastaaba burbureen. Dabadeed markii aan Akademiga nabada iyo Horumarinta Somaliland aan Gudoomiyaha ka ahaa, waxaa noo qarsoonayd in aanu waxaas di u soo celino, isla markaana aanu nabad-gelyada waxii aanu ka qaban karno aanu ka qabano.”
Waxaana Dr. Bulxan oo hadalkiisa ku soo af-meeray oo uu yidhi “Waxaanu idiin ballan-qaadaynaa Jaamacad ahaan in aanu halkan markasta aanu ku soo dhawaynayno cid kasta oo diyaar u ah in ay ku soo ban-dhigayso wax kasta oo la xidhiidha Sugaanta oo noo imanaysa.”
Wasiir ku Xigeenka Wasaarada Boostaha iyo IsgaadhsiintaSomaliland Cali Sheekh oo isuguna a madashaas ka hadlay, ayaa hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyey Ururka soo qaban-qaabiyey tartankaas Gabayada. Waxaana uu sheegay in tallaabadani door-weyn ka qaadanayso ilaalinta iyo kor-u-qaadita heerka nabad-gelyada. Waxaa kaloo wasiirku sheegayay midhaha keliya ee loo baahan yahay in tabantaabiyaa in ay yidhiin dhalinyarada, “Midhaha aynu haysanaa waa da’yarta soo kacaysa, wixii aynu gashanaana waxa uu yahay wax dalka Mustaqbalkiisa noqonaya.” Ayuu yidhi Wasiir Cali Sheekh, Mar uu ka hadlayay tartankana waxa uu yidhi “Tartanku waa waxyaabaha kordhiya ee soo saara waxa qofka ku qarsoon. Tartanka Gabadaya ah ee la xidhiidha Nabad-gelyada ee Dhalinyarayadu ku tartamayaan, waa wax aad loogu baahan oo kaalin mug leh ka qaadanaya baraaruga ilaalinta nabad-gelyada. Baraamijkanina waa mid fariin ah, oo shayga la doortay ee nabad-gelyada wax ka qiimo badani ma jiro.” Waxaana uu talo ahaan soo jeediyey oo uu yidhi “Waxa laga hadlayaa ee lagu tartamayaa ee waa sugaane wakhtigeeda hala siiyo.” Waxaa isna madashaas ka hadlay Gudoomiyaha ururka soo qabanqaabiyey xaflad-tartaneedkaas lagu soo gababayay tartankii dhex-marayay Dhalinyarada Somaliland ee lixda Gobolka ka soo kala jaaday Dr. Maxamed Ciro, oo tafaasiil ka bixiyey intii Urukaasi jiray wixii u soo qabsoomay iyo sababta ay u soo abaabuleen tartan-sugaaneedkaas ay dhalinyaradu kaga qayb-gelayeen Gabayada la xidhiidha muhiimada nabad-gelyadu u leedahay nolosha beni’aadamka. Waxaana uu hadaladiisii ka mid ahaa oo uu yidhi “Ururkan waxaanu as-aasanay 2005-tii, waxaan u qabsoomay intii uu jiray waxyaabo badan, oo waxa uu shaqooyin ka qabtay wadanka dibadiisa. Waxaana nagu kallifay in aanu Ururkan as-aasno, markii aanu wadankaas [Filand] ayaa waxaa noo muuqatay in aanu ka faa’idayso waxyaabaha salka u ahaa inay wadankooda dejiyaan, oo Filand beryihii hore waxa ay ka mid ahayd meelo ay dagaalo baabiyeen oo aad loogu dhibaatooday, isla markaaana la soo gumaystay.” Mar uu ka hadlayay sababta ay u soo qabanqaabiyeen tartan-sugaaneedkan waxa uu yidhi “Sida aad la socodtaan Somalidu waxa ay wax isugu gudbiyaan hadalka, isla markaana waxa ay aad aad u qadariyaan Gabayga oo ah shay agtooda qaali uga ah, sidaas ayaanuna ku soo qaban-qaabinay tartanka, waxaana aanu ugu talo-galnay in uu kaalin muhiim ah ka qaato kor-u-qaadista ilaalinta nabad-gelyada”
Dr. Maxamed Ciro waxa uu sheegay in tartanku muddooyinkan-ba ka soo socday Gobolada Somaliland, oo ay kolba Gobol ka soo qabanayeen tartan is-reeb-reeb ah oo loogu soo gudbayo ka ay ku kulamaayn Lixda Gobol. Waxaa uu sheegay in ay Gobol kasta gaarkiisa tartan gaar ah ugu soo qabteen, isla markaana gobolka walba uu ka soo baxay hal Inan oo u soo gudbay tartankaas guud ee caawa la soo gababagabeeyey. Waxaa kaloo uu tilmaamay inay garsootkii iyo kala saaristii tatmayaashaas ay ka hawl-galeen Abwaano xeel-dheer u leh awoodaha iyo hannaanka hal-abuurnimada.
Waxaa kaloo uu sheegay in ay dhawaan qalab ciyaareed ku wereerijiyeen Wasaarada dhalinyarda iyo ciyaaraha Somaliland, si hawlaha cayaaruhu u noqdaan kuwo sidii loo baahnaa socda.
Abwaan Axmed Aw Geedi oo isna xafladaas halkaas hadal kooban ka soo jeediyey, ayaa sheegay in sugaantu kaalin wax-ku-ool ah kaga jirto deminta colaadaha, abuurista iyo adkaynta naba-gelyada. Waxa uu xusay in Gabayaagu yahay qof sababa kara colaad, isla markaana dejin kara oo nabag-gelyo horseedi kara. “Somaligu shayga keliya ee ay maqashaa waa Gabayga, oo Gabaayaagii xilliyadii hore, colaado huraya ayay Gabay ku demin jireen oo ay nabad ku keeni jireen.” Ayuu yidhi Axmed Aw Geedi, Waxa uu tilmaamay in Gabaygu aanu da’ ku xidhnayn “Gabaygu da’ kuma xidhna ee cid kasta oo ilaahay sahlaa way gabyi kartaa, waana hibo ilaahay dadka ugu deeqo. Dhalinyaradu ha gabyaan oo kaalin muhiim ah ha istaageen.”
Sidoo kale Waxaa halkaas lagu soo badnhigay metelaad kooban oo ka hadlaysa, siyaabaha ugu fudud ee colaadu ku bilaabanto iyo sida loo damiyo ee nabad loo abuuro. Taas oo ahayd riwaad gaaban oo uu Allifay Abwaan Axmed Aw Geedi, Waxaana soo bandhigay oo metelayay kooxda dhalinyarada ah ee Circus Hargaysa ee Havayoco maamusho.
Intaa ka dib waxaa la guda-galay hawshii tartanka Gabayada, waxaa la xaadiriyay Guddigii u kala Garsooraysay tartameyaasha, oo ay ka mid aheen;Abwaan Maxamed Jaamac Kayd, Abwaan Muuse Cali Faruur iyo Muuse Cabdi Cilmi. Waxaana lagu wereejiyey hogaamintii xaflada si ay u xaadiryaan tartamayaasha, waxa ay la soo baxeen waraqahoodii qiimaynta natiijada iyo kala saarista tartameyaasha. Waxaana tartankii u dhaca sidan: 1- Ugu horayn waxaa Madasha looga yeedhay Maxamed Cismaan Budul oo ahaa Wiil dhalinyaro ahaa oo ka socday Gobolka Awdal, waxaana uu tartankaas kaga qayb-galay maanso uu ugu magac-daray “Haw Nabadu gogol maaha.” 2- Waxaa ku xigay Siciid Maxamuud Gahayr oo metelayay Gobolka Marood-jeex [X Hargaysa], waxaana uu tartanka kaga qaayb-galay maanso uu hal-ku-dhigeedu ahaa “Duni-bila.” 3- Waxaa isna loo dhawaaqay Cadbirisaaq Maxamuud Bile oo ka socday Gobolka Saaxil, oo tartanka kaga qayb-gelayay maanso magaceedu ahaa “Nabad-doon.” 4- Waxaa mar kale fagaaraha tartanka looga yeedhay Mustafe Maxamed Jibriil oo ka socday Gobolka Sanaag, isla markaana tartanka kaga qayb-gelayay maansada magaceedu ahaa “Dalku wuu Camiran yahay.” 5- Waxaa hadana markiisii loo yeedhay Axmed Cabdilaahi Jaamac oo ka socday Gobolka Sool, isaga oo tartanka kaga qayb-galay maaso uu ugu magac-daray “Guddiga Nabada.” 6- Markii ugu dambaysay waxaa loo dhawaaqay Axmed Cabdi Xirsi oo ka soday Gobolka Togdheer, oo tartanka kaga qayb-gelayay maanso hal-ku-dhigeegu ahaa “Hogo-tusaale.” Markii ay tartamayaashu dhamaysteen wacdarahoodii iyo dhoola-tusyadoodi, waxaa Mikrofonka la wareegay Guddii-garsoorka tartameyaasha, waxaana ay ku war-geliyeen ka soo qayb-galayaashii in ay qaddar faq-gaar ah dibada ugu baxayaan, si ay u soo kala saaraan tartameyaasha oo mid kasta kaalinta ku haboon loo siin lahaa. Gari labada nin kama-wada-qoslisee, faq iyo falanqayn dheer ka dib waxa ay Gudidii u suurta-gashay in ay madashii kula soo noqdaan garnaqoodii, oo ahaa in soo kala saareen tartamayaashii gaar ahaan saddex kaalmood ee ugu sareeya ee kala ah kaalmaha 1-aad, 2-aad iyo 3-aad. Waxaana uu garnaqoodii u dhacay sidan:- 1- Kaalinta koobaad waxaa ku guulaystay Maxamed Cismaan Budul oo aha Inankii ka socday Gobolka Awdal, waxaana la gudoonsiiyey shahaado iyo qaddar-lacageed. 2- Kaalinta labaad-na waxaa galay Siciid Maxamuud Gahayr oo metelayay Gobolka Marood-jeex [X Hargaysa], waxaa isna waxaana la gudoonsiiyey shahaado iyo qaddar-lacageed. 3- Halka kaalinta saddexaad uu ka galay Cadbirisaaq Maxamuud Bile oo ka socday Gobolka Saaxil, isna sidoo kale waxaa isna waxaana la gudoonsiiyey shahaado iyo qaddar-lacageed.
Sidaas ayaanu ku soo gababaysmay tartan-sugaaneedkaas muddada soo soconayay.
This entry was posted on June 26, 2009 at 7:08 pm	and is filed under News (Warka). Tagged: Somaliland, World News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.